Iingcebiso ezili-10 zokuNxibelelana neeProfayili kwiNethiwekhi yakho yoQeqesho | Martech Zone
Iingcebiso ezili-10 ze-LinkedIn zeProfayili yokuPhumelela kweNethiwekhi
NgeCawa, Oktobha 11, 2015 NgoLwesibini, Januwari 11, 2022 Douglas Karr
Le infographic evela kwi-SalesforLife ijolise kwindlela iprofayile ye-LinkedIn enokuthi yenziwe ngayo ukuze ithengiswe. Ewe, ngokoluvo lwam, yonke iprofayile ye-LinkedIn kufuneka ilungiselelwe ukuthengisa… kungenjalo kutheni uku-LinkedIn? Ixabiso lakho kumsebenzi wakho lixabiseke kuphela njengenethiwekhi yakho yobungcali.
Oko kwathethi, ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi benza umonakalo nokuba basebenzise kakubi iqonga okanye hayi Ukulungiselela iprofayile yabo ye-LinkedIn. Olunye uhlobo endifuna ukuluyeka kukuzama ukunxibelelana nabantu ongabaziyo. Ndiyaqonda ukuba ujonge ukukhulisa inethiwekhi yakho, kodwa isimemo esingenanto asiyondlela yokwenza oko. Nxibelelana nam ngemithombo yeendaba zentlalo, yenza incoko iqhubeke, undazise ukuba kutheni unxibelelwano kuwe lunokuba nexabiso- kwaye ndiza kudibanisa kakhulu!
Iprofayile yakho ye-LinkedIn akufuneki ibe kukuqhubeka kwakho-ayisiyiyo impumelelo yakho okanye malunga nendlela osityumze ngayo isabelo. Endaweni yoko, kufanele ukuba ibe zi-centric zabathengi, kugxilwe kwixabiso onokuthi unikezele ngamathuba kunye nabathengi. Phendula lo mbuzo: ndingabanceda njani abathengi bam? Nantsi indlela yokuyila iprofayili efanelekileyo ye-LinkedIn yokuThengisa uLuntu.
Uyenza njani iProfayile yakho ye-LinkedIn
Ifoto yokwenyani – Andidibanisi neekhathuni okanye imifanekiso engenanto. Ubuso bakho yeyona nto ibonakalayo onayo, yibeke kwi-intanethi. Ndingumfo ongwevu, omdala, otyebileyo… ndisafaka ifoto yam kwi-intanethi. Nanga amanye amacebiso okufumana okuhle Ifoto yeprofayile ye-Linkedin (kwaye kutheni zisebenza!).
Isihloko sakho Isihloko sesikhundla asiboneleli ngexabiso ozisa lona kwabanye. Sukuya ngaphezulu kwaye nceda sukumela ukuba ngusozigidi.
Papasha umxholo -Nika iindwendwe umxholo ofanelekileyo apho banokuchonga ubuchwephesha bakho kwishishini lakho.
Pholisha Isishwankathelo sakho -Umxholo wakho ubambe ingqalelo yabo, ngoku lixesha lokubonelela ngombala kunye nefowuni enkulu yesenzo.
Yabelana ngesiqulatho esiBonakalayo -Njengokuba iindwendwe ziskena iphepha lakho, bonelela ngomxholo obonakalayo okhangayo kwaye wahlule iprofayile yakho kwabanye.
Amava ngeZiphumo -Imbali yakho yomsebenzi ayinamsebenzi phantse kangangeziphumo ozifumeneyo kwezi zikhundla.
Ukuvunyelwa -Ngethuba besetyenziswa kakhulu kwaye bengaxatyiswanga, iprofayili engenakho ukuqinisekiswa ayibonakali ngokubonakalayo. Fumana eyakho!
izindululo -Ngokungafaniyo nokuvunywa, umntu osebenza naye othatha ixesha lakhe ekucwangciseni izincomo ezifanelekileyo, ubaluleke kakhulu.
Yongeza uPapasho - Uyabelana kwaye ubhala kwenye indawo? Qiniseka ukuba ukongeza la macandelo kwiprofayile yakho ye-LinkedIn ukuze iindwendwe zifumane ubuchwephesha bakho.
Imbeko kunye neeMbasa -Siphila kwihlabathi apho ukubandakanyeka kwakho kwezentlalo nakwezoluntu kubalulekile ekuchongeni ukuba ungumntu onjani. Ukuba uye waziwa, yabelana nabanye.
Qiniseka ukuba ujonga iprofayile yakho njengoko ibonwa luluntu kunye nonxibelelwano ukuze ukwazi ukuphucula nokwandisa iprofayile yakho. Kwicala lasekunene, i-LinkedIn ikwanikezela ngomlinganiso wamandla enkangeleko yakho… yisebenzise! Ndingacebisa kwakhona ukuphucula ukubhaliselwa okuhlawulelweyo kwi-LinkedIn. Ngaphandle kokwahlulahlula iprofayile yakho kunye nokwandisa ukubonakala kwayo, ibonelela ngezixhobo ezifanelekileyo zokuchonga ukuba ngubani ojonga iprofayile yakho kunye nendlela onokunxibelelana ngayo nabanye.
tags: kwi-infographicUmxholo odibeneyoIzivumelwano zokudibanisaamava edibeneyoIsihloko esihlanganisiweyoulungelelwaniso oludibeneyoifoto edibeneyoiprofayili edibeneyoizindululo zonxibelelwanoukuthengisa ubomiintengiso
Uyithengisa njani iApp yakho
Yintoni ukuThengisa kwangaphambili?